5 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena waa ay ku dhawacmeen weerar lagu qaaday gaari rakaab ah magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, Nov 07 – Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 13 kalana waa ay ku dhaawacmeen gaari rakaab siday oo koox dabley ahi ay ku weerareen gudaha magaalada Muqdisho xalay fiidkii.
Gaarigaan oo ahaa basaska rakaabka qaada kana dhax shaqeeya Muqdisho iyo deegaanka ceelasha biyaha, ayaa la weeraray xilli uu marayey Ex-koontarool iyo xeradii Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho waxaana la tilmaamayaa ninmanka weerarkaan gaystay oo tiradoodu dhammayd illaa 2 nin in ay xirnaayeen dirayska ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaas oo doonayey in ay gaariga baartaan intii aysan dilin darawalkii gaarigaasi.
Dhamashada iyo dhaawaca dadkaan ayaa badankeedu timid kadib markii nimankaani ay madaxda ka toogteen wadihii gaarigaasi, taas oo sababtay in gaarigu uu waddada ka baxa isla markaana uu ku dhaco gaari kala oo isna waddada marayey kaasi oo ahaa gaadiidka waaweyn ee xxamuulka qaada.
Isku dhaca labadaan gaari oo la sheegay in uu aad u xoogganaa ayaa dhaliyey inta badan khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawacba, waxaana dad goob joogayaal ahi ay idaacadda Daljir u sheegeen dadka badankooda in ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaas oo haatan lagula tacaalayo isbitaallada magaalada Muqdisho.
Inkastoo ragga falkaan gaystay la sheegay in ay ku labisnaayeen tuutaha ciidanka dawladda federalka Soomaaliya, haddana afhayeen u hadlay dawladda ayaa sheegay in aysan raggaasi ka tirsanayn ciidanka wuxuuna dhanka kale ku eedeeyey mucaaradka dawladda ku kacsani in ay falkaan soo maleegeen.
Ma ahan markii ugu horraysay oo rag ku labisan dirayska ciidanka dawladda la sheego in ay gaysteen fal noocaan oo kale ah, hase yeeshee qaadashada dirayskaasi waa mid u suutoobi karta cidkasta waxaana suuqyada Muqdisho lagu iibiyaa dharka ciidanka ee kala duwan.
Munaasabada daahfurka 2-aad ee idaacada Daljir Buuhoodle, gobolka Cayn (Taswiir).
Xarunta GECPD oo tababar u soo xirtay 20 dhallinyaro ah oo muddo 6 bilood ah baranayey farsamada gacanta.